Ernesto Valverde oo fariin digniin ah u diray Coutinho, kadib guuldaradii ay xalay kala kulmeen Levante – Gool FM
Ernesto Valverde oo fariin digniin ah u diray Coutinho, kadib guuldaradii ay xalay kala kulmeen Levante
(Barcelona) 11 Jan 2019. Macalinka kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa fariin digniin ah u diray xidigiisa khadka dhexe ee reer Brazil Philippe Coutinho kadib guuldaradii 2-1 ahayd ee xalay kaga soo gaartay Levante Copa del Rey.
Philippe Coutinho ayaan dhawaanahan ku soo bixin shaxda koowaad ee tababare Ernesto Valverde, isagoo inta badan door bidayay inuu shaxdiisa dhanka weerarka uu ku soo bilaawdo xidigaha Ousmane Dembélé, Lionel Messi iyo Luis Suarez.
Arintan ayaa waxay shaki xoogan ku abuurtay maalmihii lasoo dhaafay mustaqbalka Philippe Coutinho ee kooxda Barcelona.
Philippe Coutinho ayaa ku soo bilaawday kulankii xalay Copa del Rey ay guuldarada 2-1 kala kulmeen kooxda Levante, laakiin laacibka reer Brazil ayaan kulankan ka sameeynin qaab ciyaareed fiican, waxaana si cad looga dareemayay inuusan faraxsaneyn.
Ciyaarta kadib ayuu macalinka kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa fariin digniin ah u diray laacibkan wuxuuna yiri:
“Marka uusan ciyaareynin Ousmane Dembélé, qof walba wuxuu i weydiinayaa isaga, haatan waxaa ciyaaraya Dembélé, ee ma ciyaarayo Coutinho”.
“Waxa ay tahay in ciyaartoydu ay sameeyaan waa inay ka shaqeeyaan booskooda, haddii uusan faraxsaneyn, waa inuu dagaalamaa si uu wax u badalo”.
“Laakiin anaga ahaan waan jecelnahay labada ciyaaryahanba, mar walbana waxay u ciyaaraan si isku mid ah”.